हेर्दाहेर्दै जब चितुवाले छोरालाई लछार-पछार पार्दै लग्यो … – Naya Kura Daily
August 7, 2020 199
बालकका बुबा विष्णुबहादुर मेलाबाट घर फर्किदै थिए । तत्कालै हारगुहार भएपछि स्थानीयवासी जम्मा भएर बालकलाई खोज्नेतर्फ लागे । एक÷डेढ घण्टा खोजेपछि घरभन्दा तलको जङ्गलमा नारायणको टाउको र एउटा हात फेला पर्यो । मसारमा चार घरधुरीको मात्रै बसोबास छ । चारैतिर जङ्गलले घेरिएको ठाउँ । मृ-त्यु भएका नारायण कृष्णमायाका कान्छा छोरा हुन् ।
जेठो छोरा रोहन ७ वर्षका छन् । घटना भएको बेला जेठो छोरा रोहन र सासु घरभित्र थिए । चितुवाको आ-क्रमणबाट बालकको ज्यान गएपछि स्थानीयवासी त्रसित छन् । स्थानीयवासी पूर्णबहादुर रानाले चितुवाले फेरि पनि आ-क्रमण गर्न सक्ने भएकाले सतर्क रहनुपर्ने बताए। “दुई चारदिन अगाडी पनि गाउँमा चितुवा आएको थियो, त्यतिबेला लखेटियो । यस्तो दुखद घटना हुन्छ भन्ने सोचिएन”, उनले भने।
तनहुँमा पछिल्लो समय चितुवाको आ-क्रमण बढ्दै गइरहेको छ । चितुवाको आ-क्रमणबाट विसं २०७४ फागुन यता दश जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् भने आठ जना घाइते भएका छन् ।
तनहुँमा भएका चितुवा आ-क्रमणका घटना सबै रातिको समयमा भएका छन् । “साँझ परेपछि चितुवाले आ-क्रमण गर्ने गरेको देखिएको छ,” डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख केदार बरालले भने, “घरबाहिर कुरेर बस्ने र बच्चालाई आ-क्रमण गर्ने गरेको यस अगाडीको घटनाले देखाएको छ ।”
जिल्लामा चितुवाको आ-क्रमणका घटना सबै साँझको समयमा भएकाले त्यसबेला विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने बरालको सुझाव छ ।
“रातको समयमा बालबालिकालाई घरबाहिर एक्लै छाड्न हुँदैन, घर वरपरका झाडी सफा राख्ने, घरबाहिर उज्ज्यालो राख्नुपर्छ”, उनले भने। बरालका अनुसार एक पटक चितुवाले आ-क्रमण गरेपछि उक्त चितुवा तीन÷चार दिन सोही ठाउँ वरपर घुम्ने गर्छ ।
Prevकाठमाडौंको असन, इन्द्रचोक, टेकु र न्यूरोड सिल गर्ने तयारी
Nextकाठमाडौंमा लकडाउनमा भन्दा झनै कडाइ ! आज राती १२ बजेबाट के गर्न पाइने के नपाइने ?
जम्मू-कश्मिरको रजौरीमा फायरिङ : भारतीय सेनामा रहेका एक नेपालीको मृत्यु
आमा सा*स फेर्नु भयो भन्दा भन्दै हातै फुस्कियो मैले मेरीआमालाई ब*चाउन सकिन भन्दै छोरीले आँ*सु बगाइन्